Wararka ka soo qarxay todobaadkan Bangkok ayaa lagu soo waramayaa in la qorsheynayo in la nadiifiyo waddooyinka lagu iibiya cuntooyinka, Caro ayaa ka imaneyso dadka cuna cuntadaas raqiska ah caankana ah ee magaalada sida aadka ah looga isticmalo, Aintan ayaa noqatay sheeko gashay caalamka.
Sida uu shegayo gadomiyaha Bangkok Wanlop Suwandee in 50 dagmo oo aay ka kooban tahay magalada laga sameyn doono wado nadiifin, lana soo celin doono goobahi aay dadka sida caadiga u marijireen oo aay hada qariyeen kuwa ku gada cuntooyinka.
Waxa uu intaas ku sii daray gadomiyaha in wejiga ugu horeyo aay ka bilaawi doonan Yaowarat iyo Khao San oo ka tirsan magalada.
Maamulka dowlada hoose ee Bangkok ayaa horay mamnuucay in cunta lagu sameyo waddooyin Khao San iyo Yaowarat, “ayuu yidhi.” Waa taageeridda fulista tallaabooyin nadaafada iyo abaabulka gaadiidka.
Oo isna wuxuu sameeyey xaqiijiyo iibiya BMA ayaa mamnuucday on Waddooyinkiisa kala duwan socod, oo ay ku jiraan kuwa ku hareeraysan,
mid kamid ah taageerayaasha cuntada wadooyinka lagu cuno wadoyinka Bangkok cuntada ahna qoraa oo lagu magacabo Leela Punyaratabandhu, ayaa sheegtay in buugeda cusub ku qoridoonto dhibatada qabsan doonto hadii dowladu sameyso sida ay ku dhawaqday dadka ka shaqeesta wadooyinka,
…..QORAA MAANOW RAAGE…